55 taona ny zokiny indrindra: ravan’ny polisy ny andian-jiolahy mpamaky trano sy mpanolana | NewsMada
Famakian-trano, fanolanana, halatra moto, sns. Vesatra maromaro no hanenjehana ireto jiolahy tratran’ny polisy ireto. Tambajotra iray mihitsy no rava, izay efa nampitondra faisana iny faritra Manandona, Dorodosy, Imerimanjaka, Ambohijanaka, sns, iny.
Nidodoka am-ponja, omaly, rehefa avy natolotra ny fampanoavana ireto jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana ireto. Raha ny tatitra nampitain’ny polisy, jiolahy mpamaky trano miisa telo efa tena ikoizana amin’ny asa ratsy eny Manandona sy ny manodidina iny no tratra voalohany. Loharanom-baovao avy amina olona nanome vaovao ny nahafahan’ny polisy nisambotra ireto olon-datsy ireto ary fiaraha-miasa avy amin’ny fitsarana. Rehefa natao ny vela-pandrika, tratra teny an-tranony ao amin’ny fokontany Mendrikolovaina, kaominina Alasora, izy telo ireto, ny alahady tamin’ny 7 ora maraina. Nambaran’ny polisy fa 55 taona ny zokiny indrindra amin’ireo jiolahy raha 22 taona kosa ny zandriny. Nohamafisin’ny polisy fa efa misy fitoriana maromaro mikasika azy telo lahy ireto tonga ao amin’ny CC Tanjombato noho ny resaka vaky trano sy ny fanolanana. Rehefa natao ny fanamarinana tamin’ny alalan’ireo olona nametraka fitoriana, voamarina fa izy telo lahy ny nanatanteraka ny fanafihana miharo vaky trano teny amin’izy ireo. Nilaza ny eo anivon’ny CC Tanjombato fa mbola misy namany roa hafa karohin’ny polisy.
Tratra koa ireo jiolahy nisoloky hividy moto Kymco G5…
Jiolahy roa hafa koa tratran’ny polisy, afakomaly tamin’ny 2 ora tolakandro, noho ny resaka halatra moto niseho ny volana novambra 2020 lasa teo teny amin’ny Jumbo Tanjombato. Nambaran’ny polisy fa moto namidy tamin’ny “facebook” no hitan’izy roa lahy ireto ka nitarika azy hanatanteraka ny asa ratsiny. Mody nifanao fotoana tamin’ilay olona nivarotra azy teny amin’ny Jumbo Tanjombato ny iray amin’izy roa lahy ireto. Rehefa nisy ny fifanarahana, tapaka fa hanao fanandramana izy ireo ka nentiny avy ao aoriana ny tompon’ilay moto (natao teny amin’io toerana io ihany ny fanandramana ilay moto). Rehefa tonga teo amin’ny “barrière”-n’ny Jumbo Tanjombato, efa niandry teo ny naman’ilay jiolahy iray nisoloky fa hividy ny moto. Nodakan’ilay namany avy aoriana avy hatrany ilay tompona moto sady niakatra teo ambony moto izy ary lasa nandositra. Fiaraha-miasa amin’ireo nanome loharanom-baovao ny nahafahana nisambotra ireto jiolahy ireto ka rehefa nataon’ny polisy ny angom-baovao sy ny vela-pandrika, tratra teny an-tranony eny Itaosy ny iray niaraka amin’ilay moto Kymco G5 efa niova loko raha tratra teny Anosizato kosa ny iray. Nohamafisin’ny polisy fa misy ifandraisany amin’izy telo lahy mpamaky trano tratra teny Alasora ireto roa lahy nangalatra moto ireto. Niaiky ny heloka vitany ireto jiolahy ireto nandritra ny famotoran’ny polisy.